Fandrasana sira «Mushroom» ao anaty sakelidranon-dranomasina maty
Ny "holatra" sira dia mihady anaty ranomasina maty
Aogositra 3, 1999
Ny Ranomasina Maty dia eo amin'ny faritra atsimon'ny lohasahan'i Jordana. Ny Ranomasina Maty sy ny morony manodidina no toerana ambany indrindra amin'ny tany - 400 metatra ambanin'ny haabon'ny ranomasina. Ny anarana hoe "Maty" dia nomena an'ity ranon-drano ity noho ny fatran'ny mineraly avo lenta sy ny haavon'ny oxygen ambany. Io fitambarana io dia manakana ny endrika fiainana biolojika tsy hisy eto amin'ity faritra ity.
Ny Isiraelita dia miasa amin'ny alàlan'ny Asa maty (DSW) maty, orinasa 90 isan-jaton'ny Israel Chemical Ltd. (ICL).
Ny hetsika Jordaniana dia atao Arab Potash Company (APC), izay fananan'ny kaonsioneran'ny governemanta Afovoany Atsinanana, Jordania amin'ny ankapobeny. Ny famokarana potash an'ny DSW isan-taona dia manodidina ny 2.2 mm taonina.
Ny fizotran'ny fitrandrahana mineraly (ny potash, izay ampiasaina amin'ny fambolena fambolena) dia miorina amin'ny foton-tsolika eo ambanin'ny dobo fametrahana vita amin'ny olona, ​​ary manondraka ireo mineraly amin'ny alàlan'ny fotaka lehibe sy mavokely ary manodinana azy ho tsara ara-nofo. Ny ampahany lehibe amin'ny fizotrany dia ny fanamaivanana ny ranonorana amin'ny latabatra (NaCl) amin'ny faritry ny dobo fandroahana. Noho izany, ny dingana voalohany amin'ny fanodinana dia ny fantsom-drano avy amin'ny ranomasina ho ao amin'ny dobo 80 sq km voajanahary. Ao amin'ity dobo-drano ity, ny brine, miaraka amin'ny votoatin'ny NaCl kely dia arotsaka ao anaty dobo famokarana farany.
Tamin'ny tapaky ny taona '80 dia hita ny fisehoan-javatra voajanahary tao amin'ny dobo artifisialy. Ny NaCl dia nanomboka nanao crystallize tamin'ny endrika "holatra" tamin'ny faritra maro tamin'ny dobo. Ny tsanganana sira dia nanomboka naniry avy tany amin'ny fanambaniny. Raha vantany vao tonga tany ambonin'ny tany izy ireo dia nanomboka nitombo tamin'ny hafainganam-pandeha haingana teo amin'ny sisiny, izay namorona endrika mitovy amin'ny holatra. Ireo holatra ireo dia nametra ny velaran'ny faritra sy ny fahafahan'ny etona ao anaty dobo. Ny olona DSW dia nanomboka nitady vahaolana amin'ity olana ity amin'ny ambaratonga roa: amin'ny ambaratonga siantifika ny anton'ny fisehoan-javatra, ary amin'ny fomba ara-teknika ny fanesorana ireo holatra.
Nandritra io vanim-potoana io, nisy ekipa mpiasan'ny Oceana Marine Ltd. tao amin'ny orinasa DSW nanamboatra sy nametraka rafitra fanaraha-maso sy fomba fanaraha-maso mazoto ho an'ny mpijinja potika DSW. Ny fandinihana ny olan'ny holatra dia nanapa-kevitra ny hitantana ny Oceana ny mety ho fitaovana mahomby sy mekanika mety ahafahana manala ny fanamboarana ny masira.
Taorian'ny nanaovana fanadihadiana mialoha dia nanasa mpanamboatra dredge i Oceana mba handinika ilay olana ary hanolotra vahaolana mety. Ellicott® Nanadihady momba ilay tranonkala ny International of Baltimore, Maryland ary nangatahana hanome “garantie d'exploitation”.
Ny mpitantana ny Oceana dia nanapa-kevitra fa ny Ellicott® Fitaovana marika no mety indrindra amin'ny tetikasa. Ny antony nahatonga izany dia:
Traikefa amin'ny fanerena matanjaka.
Ellicott® Iraisampirenena any Baltimore, Maryland dia nanaiky ny hanome “garantie d'exploitation” hahazoana antoka fa ny fitaovan'izy ireo dia afaka mamaky tsara ireo formations holatra mafy.
Ny orinasa dia manana fahaiza-manao amin'ny fananganana sy fandefasana dredge mety tsara ao anatin'ny enim-bolana.
Oceana no voafidy (miaraka amin'ny fankatoavana DSW) Ellicott® marika B890 drobaka famafazana, novaina tamin'ny radiatera manokana sy fitaovana hafa ho an'ny tetikasa. Ny dredge dia misy gony 100 HP roa kodiarana, kalesin'ny spud ary milina CAT.
Ny fifanarahana amin'ny tetik'asa mpanamory dia vita sonia teo anelanelan'ny DSW sy Elliana (orinasam-pifandraisana mpiara-miasa noforonina teo anelanelan'i Ellicott® ary Oceana.) Ny faritry ny tetik'asa dia ny manondraka fantsona enina ho an'ny halavan'ny 23km, ny 50m, amin'ny alàlan'ny faritra moka mifangaro (30-40 fitambaran'ny isan-jatony.) Ny vokatr'ilay tetik'asa dia nanaporofo ny fahafahan'ny dredge hanatanterahana ilay tetikasa. . Nandritra io tetik'asa io dia namatsy fotoana betsaka tao amin'ny drafitra i Elliana.
Ny famolavolana sira dia mafy dia mafy, manana hatramin'ny 3,000 psi ary 1,500 1990 psi eo ho eo. Elliana dia nanohy ny fanatsarana ny volavolan-dredge ho avy. Nandritra ny taona 30, DSW dia nanomboka naka tolo-bidy avy amin'ireo orinasa mpanao «dredging» manerantany mba hamafana ny velaran-tany 2 km1991. Orinasa Israeliana roa no nahazo fifanarahana telo taona. Nanomboka niasa ny Oceana tamin'ny taona XNUMX. Tamin'ity dingana ity no i Ellicott® International of Baltimore, nanapa-kevitra ny hisintaka amin'ny fiaraha-miasa i Maryland mba hisorohana ny fifaninanana amin'ireo mety ho mpanjifa.
Oceana dia nividy Ellicott roa® marika drakitra B890 avy amin'ny Marcopper Mining Corporation any Filipina. Oceana dia nanamboatra sy nanitsy ireo dredge hifanaraka amin'ny filan'ny tetikasa. Ny fanatsarana dia nahitana ny fanitarana ny vatan-tsambo mba ahafahana manidina kokoa amin'ny toeran'ny vatofantsika.
Ellicott® Ny iraisam-pirenena dia nanome kodiarana roa vaovao ho an'ny sambo folo taona, izay amboarina voalohany miaraka amina kodiarana tokana, ary nanangana paompy sy maotera.
Ny tahan'ny famokarana Oceana miaraka amin'ny dredge bucketwheel dia 35 isan-jato lehibe kokoa noho ny dredge hafa miasa amin'ny tetikasa. Mbola mitohy ny tetikasa miaraka amin'ny Ellicott® marika marika.
Namboarina avy amin'ny Fitrandrahana harena an-kibon'ny tany sy fanamboarana